Admin / Office Staff | Myat Min Co., Ltd. ﻿
Admin / Office Staff
1.12.2018, Full time , Construction / Building
Company: Myat Min Co., Ltd.
This is also the owning company of Novotel Inle Myat Min, MGallery by Sofitel Inle (opening soon) and Pullman Yangon Myat Min (opening soon) and business tower. It is the best place for future career development
and prospects of the employee. We would like to grow together and learn from each other for the best working place.Myat Min Co., Ltd.Myat Min Company Limited is the local big corporate company which is doing construction, real estate development, hotel projects and other agriculture and livestock business.
•	အရက် ၊ ကွမ်း၊ဆေးလိပ် ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။
•	မည်သည့်ဘွဲ့ ရမဆိုလျှောက်ထားနိုင်သည်။
•	အသက် (၂၅- ၃၅)အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	Procurement , Admin, Front Office, ပိုင်းအား ကျွမ်းကျင်စွာ နားလည်ရမည်။
•	လုပ်သက် ( ၂~ ၄) နှစ်
•	လိုအပ်လျှင် နယ်သွားနိုင်ရမည်။
•	အစိုးရုံးများ၊ အခွန်ရုံးများ ၀င်ထွက်သွားလာနိုင်ရမည်။
•	ကုမ္ပဏီစည်းကမ်းအား တသွေမတိမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်။
Work location Yangon,Myanmar.
Job Function: Admin / Office Staff
Job posted: 1/12/2018
Site Store keeper
Myat Min Co., Ltd.
115 Days, Full time , Construction / Building
•	တာဝန်သိတတ်မှုနှင့် တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ •	အသက်(၃၀)နှစ်မှ(၄၀)နှစ်အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	အကျင့်စာရိတ်တကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားခြင်းမရှိရပါ။
This is also the owning company of Novotel Inle Myat Min, MGallery by Sofitel Inle (opening soon) and Pullman Yangon Myat Min (opening soon) and business tower. It is the best place for future career development and prospects of the employee. We would like to grow together and learn from each other for the best working place.
Myat Min Company Limited is the local big corporate company which is doing construction, real estate development, hotel projects and other agriculture and livestock business.
•	လိုအပ်လျှင် နယ်သွားနိုင်ရမည်။ •	အရက် ၊ ကွမ်း၊ဆေးလိပ် ကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ •	အစိုးရုံးများ၊ အခွန်ရုံးများ ၀င်ထက်သွားလာနိုင်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီစည်းကမ်းအားတသွေမတိမ်းလိုက်နာနိုင်ရမည်။
•	စတိုပိုင်းတွင် ဆောင်ရွက်ဖူးပြီး ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများအား နားလည်ရမည်။ •	ကျရာနေရာ၊ ပေးအပ်သော တာဝန်ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပီး အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းကောင်းမွန်ရမည်။
Drafter & Structure Engineer
•	အလုပ်တွင် ဖိအားပေးမှုအား ခံနိုင်ရမည်။ •	မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ နိုင်သောသူ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်းအား အတိအကျ လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် နှစ်ရှည် တာဝန်ထမ်းဆေ ...
•	အလုပ်တွင် ဖိအားပေးမှုအား ခံနိုင်ရမည်။
•	ရိုးသားကြိုးစား၍ တာဝန်ယူနိုင်စိတ် ရှိသူဖြစ်ရမည်။ ဒေသမရွေး ပေးအပ်သည့်တာဝန်ကို တိကျစွာထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။
122 Days, Full time , Construction / Building
•	Self-motivated,committed and able to work independently •	Can work under presser •	Good command in English
130 Days, Full time , Construction / Building
•	နယ်ဆိုဒ်များတွင်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။(အင်းလေး /မန္တလေး/ပဲခူး)
136 Days, Full time , Construction / Building
•	အကျင့်စာရိတ်တကောင်းမွန်ပြီး အရက်သေစာသောက်စားခြင်းမရှိရပါ။
137 Days, Full time , Construction / Building
•	Good interpersonal and communication skill
140 Days, Full time , Construction / Building
•	မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ နိုင်သောသူ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်းအား အတိအကျ လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
145 Days, Full time , Construction / Building
153 Days, Full time , Construction / Building
•	Fresh graduates of related subjects are also encouraged to apply •	Strong knowledge and expertise in financial statement •	Proficiency in computer literacy
Assistant Site Store Manager
155 Days, Full time , Construction / Building
•	အထက်လူကြီး၏ ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	တာဝန်သိစိတ်နှင့် တာဝန်ယူလိုစိတ်ရှိရမည်။ •	မည်သည့်ဘွဲ့ရမဆို လျှောက်ထားနိုင်သည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားပီး အကျင့်စာရိတ္တပိုင်းကောင်းမွန်ရမည်။
158 Days, Full time , Construction / Building
•	အလုပ်တွင် ဖိအားပေးမှုအား ခံနိုင်ရမည်။ •	မိမိ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားကို ကိုယ်တိုင် တာဝန်ယူ နိုင်သောသူ၊ ကုမ္ပဏီ၏ စည်းကမ်းအား အတိအကျ လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	နယ်ဆိုဒ်များတွင် သွားရောက် တာဝန်ထမ်း ...
172 Days, Full time , Construction / Building
•	နယ်ဆိုဒ်များတွင်သွားရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။(အင်းလေး /မန္တလေး/ပဲခူး) •	Age limit over 30 years old
197 Days, Full time , Construction / Building
•	Must be able to problem solving skill
Assistant HR Manager/HR Manager
198 Days, Full time , Construction / Building
Admin / Office Staff Admin,Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Myat Min Co.,Ltd Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Admin / Office Staff Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Search for good job in Kayin at www.jobless.com.mm. Our job specialist will help you to search Kayin jobs and fill your CV. Plenty of work in Kayin state. Apply online at Jobless.com.mm and find your dream job.
Looking for job in Lashio Apply online at www.jobless.com.mm directly to thousands employers.
Want to work in Kyeikdon? Find the best jobs in Myanmar at www.jobless.com.mm
Work in Yangon (Rangoon)(5130)
Work in Yangon Region(962)
Work in Mandalay Region(491)
Work in Mandalay City(96)
Work in Magway Region(74)
Work in Bago Region(66)
I.E.M Co., Ltd.(63)
Mo Mo Play
Trade Marketing Staff
ACECOOK MYANMAR CO.,LTD.
Sale Admin F (1)
International KLM Co., Ltd.
Sar Taw Kal NISSAN Co., Ltd.
Junior Office Coordinator
HR & Admin Executive M (1)
Telecom Logistic Warehouse Officer
Junior Customer Service Staff (NOC Room)
Assistant Admin & HR Manager
HR& Admin Executive
Ticketing & Reservation Staff